ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း………………………….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း…………………………..
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 10, 2011 in Photography | 31 comments
၀င်းဦးဆိုထား တယ် ဆရာမြို့မငြိမ်းရေးပေါ့။
ဒီအရိုးစုလေးကို သေသေချာချာကြည့်ရင် စိတ်ထဲမယ် ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ ?
ဒီအရိုးစုလေးက အလဟဿထားတာမဟုတ်ဘူးရယ် လူတွေကို တရားရအောင်တဲ့၊
တစ်ပုံနဲ့ တစ်ပုံတူသလိုလိုရှိနေပေမယ့် တကယ်ကြည့်ရင်တော့ မတူပါဘူး။
ဒီပုံလေးရဲ့ ရာဇ၀င်ကတော့ …………………………..
ကြည့်ပြီးတာနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကျလိကျလိ ဖြစ်မနေနဲ့နော်။
မေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေထား ။
ဒီအရိုးကိုကြည့်ရတာ ယောက်ျားလေးအရိုးဖြစ်ရမယ် … သေသွားခဲ့တာ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်ရှိမယ့်ပုံပဲ …
၀မေမေ ကြည့်ရတာ ရှားလော့ဟုမ်းနဲ့ ဆွေမျုိးတော်မယ်ထင်ပါရဲ့။
ကိုပေါက်ကို ရယ်ပြနေတယ် ထင်တယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာထင်တယ်။ ဒါကြောင့် ယောကျားင်္လေး
ကြောက်တတ်ပါတယ်ဆိုမှ တည့်တည့် တိုးပြီ။ ဒီညတော့ အိပ်ပျော်မယ် မထင်။ သေချာကြည့်တော့ စိတ်ထဲမယ် ကြောက်လာတယ် ဘာကိုမှန်းမသိ။ လေးပေါက်ကတော့ တွေ့လည်း တွေ့တတ်တယ်။
မဒမ်ပေါက်က တောင် ဟောက်သေးတယ်။
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ရိုက်တုံးက ရိုက်ပြီးတော့တဲ့။
အရိုးစုကြီးမြင်တာတောင် တရားမရမိသေးဘူး။ စိတ်ထဲမှာလား……မကြောက်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုမြင်လို့ အားတက်ပြီး ပြုံးပြနေတယ်ထင်ပြီး ကိုယ်တောင်ပျော်သွားသလိုလို။
ကိုယ်အလှည့်ကျလည်း အရိုးဖြစ်တာတောင်ပြုံးနေနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားရမယ်လို့တော့ တွေးမိလိုက်တယ်။
အဲ.. ဒီခေတ်မှာ အရိုးကောရှိသေးလို့လားနော်။
aye thet mon says:
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ထားထားတာလား…….ဒီလို အရိုးစုထားထားတာ တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူး
အရိုးစု ရဲ့ ဘေးမှာ မျက်နှာသုတ် အစိမ်းလေး နဲ့ တဖက်မှာ ပုံးတလုံး မှောက်ထားတာ ရှိတယ် သေချာ ကြည့်လိုက်…
အမှန်က အရိုးစုက ရေပုံးထဲ မှာ ရေထည့်ပြီး မျက်နှာသုတ် လေးနဲ့ ရေပတ်တိုက်နေတာ.. လူလာသံ ကြားတော့ အမြန် ရေပုံးလေး မှောက်ပြီး မျက်နှာသုတ်လေး တန်းပေါ် တင်ပြီး ခပ်တည်တည် နဲ့ အမြန် ပြန်ပြီး ပုံးထဲ ပြန်ဝင်နေတာ.. လာတဲ့ လူတွေကို ပါးစပ်ကြီး ဖြဲပြီးတောင် ပြုံးပြနေတာ.. အမှတ်မထင် သွားကျွှတ်ကျသွားတာ အောက်သွားတချောင်း အရှေ့တည့်တည့်က မရှိဘူး။
ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်းကြောက်လာလို့ … ပါးစပ်ကြီးက ဖြဲပြီး ပြုံးပြနေသလားမှတ်တယ်….
ရေကန်နားမှာ ထားတာဆိုတော့ ရေချိုးရင်းသေသလားမှ မသိတာ…..
ပြောချင်တာက အချိန်မဟုတ် အခါမဟုတ် ရေချိုးမကဲနဲ့ …. မဟုတ်ရင် ငါ့လိုဖြစ်မယ် ပြောချင်တာနေမှာ…
ဒီအရိုး စုကို အိမ်ဖြူတော်မှာ သွားထားရင် ကောင်းမလားစဉ်းစားမိတယ်…..:)
သေသေချာချာကြည့်တော့ ပင့်ကူအိမ်တွေ တက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
ရိပ်သာတွေမှာ အသုဘ ကမ္မဌာန်းပွားများဖို့ထင်ပါတယ်။
မှန်ပုံးထဲ ထည့်ထားတော့ သိပ်ကြောက်စရာ မကောင်းသလိုပဲ။ သော့ခေတ်ထားလို့။
အဲဒီခတ်ထားတဲ့ သော့တွေကို အထက်လမ်းဆရာတယောက်က စီမံလုပ်ရတယ်ကြားဖူးတယ်..။
အထဲက ပင့်ကူမျှင်လို ဟာတွေကလည်း အစီအမံတွေပဲ..။
အဲဒါ..တယောက်ယောက်က ဖွင့်လိုက်ရင်.. အဲဒီအရိုးစုမျက်လုံးနေ၇ာတည့်တည့်ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေဆီ .. ဘယ်မှာနေသူဖြစ်ဖြစ်.. လိုက်လာေ၇ာတဲ့..။
အသုဘ ကမ္မဌာန်းပွားများတယ်ဆိုပြိး.. ကြည့်ထားတဲ့သူတွေဆို.. မိသားစုလိုက်ကို.. အတင်းလာခေါ်တာတဲ့..။
အဲဒီကိုရင်က …ရေနစ်သေထားတာမို့.. လာခေါ်ရင် ဘု၇ားစာရွတ်တာလောက်နဲ့ ငြင်းမရဘူးလည်းဆိုထားတယ်..။
ဓါတ်ပုံထဲမလည်း.. (စိတ်မချရတာမို့) မျက်လုံးနေရာ တည့်တည့် မကြည့်လိုက်ကြနဲ့နော…။
သဂျီးက ပုံကို သေချာ ကြည့်ပြီး စာရေးလိုက်တာ ဖြစ်လို့.. ဘယ်နေရာ ဖြစ်ဖြစ် လိုက်တာ ရောတဲ့.. ဒန် တန် တန်….
ကျနော်က စီရင်ထားတဲ့ အထက်လမ်းဆရာ နာမည်တောင်သိသေးတယ်။ သူကရာထူးတော့အကြီးသား။
ဘုန်းကြီးကျောင်း လား ၊ ရိပ်သာလား တစ်ခုခု ပဲထင်တယ်နော်။
ညဘက်များအဲဒီ့နေရာသွားရင်တော့ နည်းနည်းတော့ လန့်မိမှာပဲ ….
တရားရမရတော့ မသေချာဘူး …. ကြောက်တာကအရင်ဖြစ်မှာ
အဲဒီအရိုးစုက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်က ကားတိုက်ခံရပြီးသေသွားတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့အရိုးစု …
ဘာဖြစ်လို့ အနှုတ်ပေးလိုက်တာလဲမသိဘူး … ကျွန်မက ဇာတ်ကြောင်းကို အမှန်သိလို့ အမှန်အတိုင်းရေးပြလိုက်တာပါ … သန်လျင်ဖားအောက်ရိပ်သာထဲမှာ ရှင်းပြတဲ့သူက သေချာရှင်းပြခဲ့လို့ သိခဲ့ရတာ …
၇ွာသားတို. သေသေချာချာ ကြည်.ပြီး တရားသဘောလို.မှတ်နော်
ကိုယ်.အလှည်.ကျရင် ဒီလိုအရိုးစုတောင် ကျန်ရစ်မှာမဟုတ်ဘူး
မီးသဂြိုလ် မှာဗျ ယူချင်တယ်ဆို၇င်တောင် အရိုးစုကျန်မှာမဟုတ်ဘူး
တချို့ရိပ်သာတွေမှာ တရားထိုင်တဲ့ခန်းမမှာပဲ အရိုးစုကို ချိတ်ထားတာ ဓါတ်ပုံထဲ ကြည့်ဖူးတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေက မှော်ဘီက ဗောဓိရိပ်ငြိမ်ကျောင်းကို ရောက်တုန်း ဓမ္မာရုံဘက် လျှောက်ကြည့်မိတယ်။ မိုးကရွာထားတော့ အောက်ဖက်ပဲကြည့်သွားနေရာကနေ အပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ ခေါင်မိုးပေါ်ကနေ အရိုးစုကြီး ချိတ်ပြီး တန်းလန်းဆွဲချထားတာ တွေ့လိုက်တော့ ရုတ်တရက် လန့်သွားတာပဲ။ ကိုပေါက်တွေ့တဲ့ ပုံလိုတောင် မှန်ဘောင်တွေထဲ ထည့်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။
ရုတ်တရက် ဆိုရင်တော့ လူတွေ လန့်ကြမှာပါ ..
တကယ်က အသက် မရှိတဲ့ အပြင် အသားပါ မရှိတော့တဲ့ ပစ္စည်းပဲလေ ..
တို့ ကျောင်းတက်တုန်းက စာကျက်ရတဲ့ အရိုးတွေကို သေတ္တာနဲ့ ထည့်ပြီး ကုတင်အောက်မှာ ထားခဲ့တယ် ..
ကျောင်းပြီးမှပဲ .. အငယ်တန်းက လူကို လက်လွှဲလိုက်တယ် .. ရတုန်းကလဲ အကြီးတန်းက အလကား ပေးခဲ့တယ် .. ကိုယ်ကလဲ အလကား လက်လွှဲပေးခဲ့တယ် .. (အခုဆိုရင် အရိုးတွေ ရှားနေပြီ . အလကား ရချင်မှ ရတော့မှာ)
သန်လျင် ဖားအောက်ရိပ်သာ စင်းကြန်လမ်းနံဘေးက အရိုးစုလို.ထင်ပါတယ်…အဲဒီ့ရှေ.မှာတောင် ဆိုင်းဘုတ်လေးထောင်ထားသေးတယ် “ငါလည်း တချိန်က သင့်လိုနေခဲ.ဘူးတာပဲ…သင်လည်းတချိန်တော့ငါ့လိုဖြစ်ရဦးမှာပါ” အခုရှိ/မရှိ တော.မသိပါ…
မှန် မှန် မှန် သိပ် သိပ် မှန်
ဒန် ဒန် ဒန် ဒန့် ဒန့် ဒန်
မော်လမြိုင်ဖားအောက်မှာတော့ မြို့ပေါ်က သူဋ္ဌေးသမီး အသက်နှစ်ဆယ်လောက် သေးသေးသွယ်သွယ်လေးရဲ့ အရိုးစုကို သူ့မိဘတွေက လှူထားတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။မော်လမြိင်ရောက်ခဲ့ရင်တော့ သွားကြည့်ဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
တောက်….ဒေါ်ပဒုမ္မာဖြေတာကြည့်ပြီး သန်လျင်ဖားအောက်တောရလို့ ဖြေမလို့ဟာ ဦးပေါက်က စောဖြေလိုက်တယ်။ အန်တီဝေမနေ့က ဖြေကထဲက အထာပေါက်လိုက်ရမှာ၊ အခုတော့
ဖားအောက်ရိပ်သာ strictly follows the method of “အဘိဓမ္မာ ပိဋိကတ်”.
weiwei says: (Edit)
(ဘာဖြစ်လို့ အနှုတ်ပေးလိုက်တာလဲမသိဘူး … ကျွန်မက ဇာတ်ကြောင်းကို အမှန်သိလို့ အမှန်အတိုင်းရေးပြလိုက်တာပါ … သန်လျင်ဖားအောက်ရိပ်သာထဲမှာ ရှင်းပြတဲ့သူက သေချာရှင်းပြခဲ့လို့ သိခဲ့ရတာ)
မဝေရေ အရင် က ဂေဇက်မှာ like disklike က တကယ်ကို သေချာဖတ်ပြီးပေးတာ။
အခုဖြစ်နေတာက လက်ဆော့ တာ။
သေချာတာက တော့ ကျနော့်တို့လို့ အမြဲဖတ်နေရေးနေ ကော်မင်ပေးသူတွေက ဒီလိုပေါက်ကရအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုပါ မဝေရေ။
ကျနော်လဲအစက ဒါကို စိတ်ထဲထားတယ် အခုတော့ လှည့်ကို မကြည့်တော့ ဘူး။
ရဲရဲတောက် တို့ဗမာတွေ (အနှုတ်တွေ) တွေ့လို့ အမြန်ရှင်းလိုက်ပါဦးမယ်။
အရိုးစုကြီးမြင်တာတောင် တရားမရဘူး .. ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြောတာပါနော်။ ကျမခုထိ တရားမရသေးဘူးလို့ပြောတာပါ။ အခြားလူများကို ထိခိုက်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်။ စာလုံးရွေးတာ မှားသွားလို့ပါနော။ ဘာမှကိုမပြောရဲတော့ဘူးဖြစ်နေပါပြီ။